China Galvanized Welded Waya ntupu emeputa na soplaya |Ọwụwa Anyanwụ Yilong
GALVANIZED WELDED ntupu
Hot Dip Galvanized Mgbe Akpara akpa
Eletrik Galvanized Tupu ịkpa akwa
Eletriki Galvanized Mgbe Akpara akpa
Anyị waya ntupu nakweere galvanizing usoro, na ọ nwere ike idowe ruo ọtụtụ afọ na-enweghị nchara na corrosion n'èzí ojiji.Ọ nwere njirimara nke nguzogide okpomọkụ dị elu, nguzogide corrosion, mgbochi nchara, ike dị elu.
Igwe ntupu ígwè ahụ dị larịị, nhazi ya bụ otu, dị mfe ilekọta, ọ naghị eyi ya ma na-adịgide adịgide, ma nwee ogologo ndụ ọrụ.
Ntupu galvanized welded dị mma maka ngere agwọ, oghere opossum rehab, ụlọ ọkụkọ na-agba ọsọ, fencing oke bekee, akwa ifuru, nchekwa olulu sara mbara, osisi mkpụrụ osisi, ubi akwukwo nri, iji gbochie obere critters dị ka voles, gophors, racoons, etc.t's ssuitable ngịga nke ọkụkọ, oke bekee, nnụnụ, nwamba na nkịta.Na ọtụtụ-eji na fences nke ifuru akwa, ubi, osisi na amaokwu.Enwere ike iji ya gbochie hamsters, raccoons, agwọ na anụ ọhịa ndị ọzọ.
Jiri nke a chebe inine na mgbọrọgwụ ifuru, bulbs, rhizomes, wdg site na tunnelling anụmanụ.Enwere ike iji ya mee nkata n'otu n'otu ma ọ bụ ahịrị akwa akwa ubi.Weta ihe ịchọ mma obodo na hip artisanal n'ime ụlọ gị jiri ntupu a gbadoro anya maka nka;
Enwere ike iji ntupu maka ụgbụ nchekwa, ụgbụ ụlọ, ụgbụ fan, ụgbụ ọkụ, ụgbụ ventilashị ntọala, ụgbụ ogige, ụgbụ mmiri mmiri, ụgbụ kabinet, ụgbụ ọnụ ụzọ na ụgbụ windo, wdg.
Dị ka mkpa dị iche iche si dị, ị nwere ike iji tin mkpa ịkpụ n'ụdị na nha dị iche iche ma ọ bụ tụgharịa ya n'ụdị dị iche iche ị chọrọ.Biko yie ihe nchebe mgbe ị na-arụ ọrụ iji zere mmerụ ahụ.
Enwere ọtụtụ nkọwa na akụkụ dị iche iche, ma na-akwado nhazi nhazi batches.Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo iji hụ na afọ ojuju gị.
Nkwakọ ngwaahịa: mpịakọta ọ bụla nwere akara agba dị ka ihe achọrọ.Mgbe ahụ, tọpụ mpịakọta ma ọ bụ ngwugwu ma ọ bụ ịkwakọ ngwaahịa site na pallets ma ọ bụ katọn.
Nke gara aga: Galvanized hexagonal waya netwọk
Osote: Ngwunye waya welded PVC
3d welded Panel nsu, Ọnụ ụzọ ámá efere e ji achọ mma, Ihe ndozi Ugboro abụọ Waya Panel Mkpuchi ntụ ntụ, Ọnụ ụzọ ámá ọkọlọtọ, Bracket, Austrịa Y Post,